Empirical pamwero ruzivo mune zvesayenzi kuti pamwero unoenderana kutsinga dzinouya padanho tsvakurudzo, ari yokungotaura tsime - musoro kana musoro. Chokwadi, hapana mhedziso matsamba uchi navo. It Vakawana kuti empirical pamwero zivo zvinosanganisira musoro kwete chete, asiwo zvine musoro kuongorora. Kana mashoko aya akagamuchira pfungwa tsika pano kaviri pakutanga kubudiswa notional (musoro) zvinoreva.
Empirical ruzivo, saka, chinoratidza chaicho akaumba empirically kwete chete. Dzinomirira chaizvo kubatana mafungiro uye nyama kuratidzwa chokwadi. Muchiitiko chino, pakutanga chinhu nyama Kufungisisa uye mafungiro anozadzisa omurume zvichiongororwa, kutsigira basa.
Empirical uchapupu kununura sayenzi chokwadi. Kutsunga kwavo chinhu chinokosha chipi kuferefeta. Saka empirical pamwero zivo chinowedzera pakagadzwa uye kuunganidza nesayenzi chokwadi.
The chokwadi chaitaurwa yakavimbika kuisa chiitiko unfabled chiitiko. Izvi rakanyorwawo empirical ruzivo zvakafanana nounhu hwakadai so "kunoguma", "zviitiko".
Zvinofanira kucherechedzwa kuti chokwadi havasi chete ive ruzivo mungabva uye nheyo yokungotaura pfungwa "nyama". Ndivowo chokuratidza chokwadi uye nderechokwadi.
Empirical pamwero ruzivo kunoita kuti asimbise chokwadi munzira dzakasiyana-siyana. Nzira aya anosanganisira pakuongorora, kuedza, kuenzanisa nekuyera.
Cherechedzo akataura kwemaune uye hurongwa omumwe mananara uye zvinhu. Chinangwa ichi ndiko kuziva maonero ukama uye zvivako zviri mananara kana zvinhu. The akataura anogona kuitwa zvakananga kana kuti zvisina (kushandisa maturusi - maikorosikopu, kamera uye nevamwe). Zvinofanira kucherechedzwa kuti yakadaro kudzidza pamusoro nguva uye anova kwakatooma kunanga nesayenzi yemazuva ano.
Achienzanisa inonzi zvishande muitiro. Ndicho nheyo, maererano izvo musiyano kana kufanana pakati zvinhu. Kuenzanisa inoratidza quantitative uye Qualitative zvivako uye maitiro zvinhu.
Zvinofanira akati kuti nzira kuenzanisa kwakakodzera kuziva zviri homogeneous mananara kana zvinhu zvichiumba makirasi. Sezvakangoita vakarinda, iyi nzira zivo inogona zvakananga kana kuti zvisina kunanga. Muchiitiko chokutanga nokuenzanisa unoitwa apo vaviri zvinhu correlating kune yechitatu, asiri mureza.
Chipimo zvinoreva kugadzwa kuva nhamba indekisi womumwe kukura achibatsirwa dzakananga dzakabatana (Watts, masendimita, makirogiramu, etc.). Nzira iyi ine quantitative kuongorora yaishandiswa kubva pakutanga itsva nesayenzi European. Nemhaka wayo kwazvo chikumbiro nekuyera razova chinhu makemikari vanzwe zivo yesayenzi.
Nzira dzose pamusoro zvinogona kushandiswa zvese vakazvimiririra uye yakasanganiswa. The yakaoma pakuongorora nekuyera uye kuenzanisa tiri chikamu nzira zvikuru kunzwisisa kuti empirical ruzivo - chiedzwa.
Nzira iyi inosanganisira kudzidza nyaya iri pachena akanyorwa mashoko ezvinhu ake kana kubereka kubudikidza chakagadzirwa zvinoreva kuziva avo kana zvimwe zvinhu. The kuedza ndiyo nzira vanoshingaira empirical kudzidza. Active iyi nyaya zvinoreva kukwanisa kupindira nyaya pataidzidza kana muitiro mamiriro.
Kuva musayendisiti: tsananguro imwe nzira rokusika uye anoshanda audzwa
The diffusion coefficient - apo uye zvakadini
The zvazvingava vemarudzi dzevanhu
Chii Kureba mugaranhoko muvana uye vakuru? Sei mugaranhoko uye kuti inoshanda sei?
Sei kugadzira kujairika keke "Turtle" nokuti vana yezororo?
Kana ukatevera zviratidzo Zodiac: maruva horoscope
How kusarudza muchato mifananidzo
Einstein-Barr utachiona: zvinokonzera, zviratidzo uye kurapwa
Sundress panguva uriri muenzaniso anogona kuva nyore
Chii nani kuita mapuriro ari mufurati? kurumbidza
Summary: "The Ugly Duckling" G. H. Andersena
Marinade nokuti kudira. Preparation of marinade kuti kudira
Lavender Hotel Sharjah 4 (United Arab Emirates / Sharjah): kuongorora kwevatariri
Stylish muchato kugadzirwa musoro kuti bvudzi pfupi pamwe chifukidziro
Interior zvinhu nemaoko avo chii kunotsvaka, vachitevera pfungwa?
Cabbage Salad pamwe gaka uye ...